(MGBE) CDC wepụtara ozi ngwa ngwa maka onye America ọ bụla nwere ọgwụ Pfizer
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » (MGBE) CDC wepụtara ozi ngwa ngwa maka onye America ọ bụla nwere ọgwụ Pfizer
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ala US Biden na ndị ọkachamara ahụike na United States nwere ọkwa dị iche iche n'ihe banyere ogbugbu COVID-19 nke atọ Taa, Center for Control and Prevention Disease na United States wepụtara ezigbo ndụmọdụ maka mgbatị ahụ taa, opekata mpe maka Pfizer. ogwu.
Emelitere: Ewelitela mmelite Booster Shot na Moderna na Johnson Johnson taa.
pịa ebe a ịgụ.
Taa, onye isi CDC Rochelle P. Walensky, MD, MPH, kwadoro CDC Advisory Committee on Immunization Practices '(ACIP) maka ịgba ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 na ụfọdụ ndị mmadụ ma tụọkwa aro maka ndị ahụ. nọ n'ọnọdụ ọrụ na ụlọ ọrụ nwere nnukwu ihe egwu.
Ikike nchịkwa nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) na ntuziaka CDC maka ojiji bụ nzọụkwụ dị mkpa na -aga n'ihu ka anyị na -arụ ọrụ ịnọrọ n'ihu nje ahụ ma chebe ndị America.
Ntụziaka nwa oge a sitere na CDC na-enye ohere ka nde nde ndị America nọ n'ihe ize ndụ kachasị maka COVID-19 nweta ogbugba Pfizer-BioNTech COVID-19 iji nyere aka nwekwuo nchedo ha.
CDC na -atụ aro:
ndị mmadụ 65 afọ na okenye na ndị bi na ntọala nlekọta ogologo oge kwesịrị nweta ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 opekata mpe ọnwa isii ka usoro Pfizer-BioNTech nke mbụ ha gasịrị,
ndị gbara afọ 50-64 ọnọdụ ahụike na-akpata kwesịrị nweta ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 na opekata mpe ọnwa isii ka usoro Pfizer-BioNTech nke mbụ ha gasịrị,
ndị gbara afọ 18-49 ọnọdụ ahụike na-akpata nwere ike nweta ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 opekata mpe ọnwa isii ka usoro Pfizer-BioNTech nke mbụ ha dabere, dabere na uru na ihe egwu ha n'otu n'otu, yana
ndị gbara afọ 18-64 nọ n'ihe egwu dị elu maka ikpughe na mbufe COVID-19 n'ihi ọnọdụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ikenweta ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 opekata mpe ọnwa isii ka usoro Pfizer-BioNTech nke mbụ ha dabere, dabere na uru na ihe egwu ha n'otu n'otu.
Ọtụtụ n'ime ndị tozuru etozu ugbu a ịnata mgbatị agbamume nwetara ọgwụ mgbochi mbụ ha n'isi mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ha ga -eritekwa uru na nchekwa ọzọ. Site na ikike Delta dị iche iche dị ka ụdị mgbasa na ikpe COVID-19 na-abawanye nke ukwuu n'ofe United States, mgbọ agbamume ga-enyere aka wusie ike megide ọrịa siri ike n'etiti ndị ahụ nọ n'ihe egwu dị elu maka ikpughe na COVID-19 ma ọ bụ nsogbu. site na ọrịa siri ike.
CDC ga-aga n'ihu na-enyocha nchekwa na ịdị irè nke ọgwụ mgbochi COVID-19 iji hụ na ndụmọdụ dabara adaba iji chebe ndị America niile. Anyị ga -enyochakwa data dị ngwa ngwa dị n'izu ndị na -abịanụ iji nye ndụmọdụ ngwa ngwa maka ndị ọzọ ma ọ bụ ndị nwetara ọgwụ mgbochi Moderna ma ọ bụ Johnson & Johnson.
Dọkịnta Walensky kwuru, sị:
Dịka onye isi CDC, ọ bụ ọrụ m ịmata ebe omume anyị nwere ike inwe mmetụta kachasị. Na CDC, a na -enye anyị ọrụ inyocha data dị mgbagwoju anya, na -abụkarị nke na -ezughị oke iji mee ezigbo ndụmọdụ na -akwalite ahụike. N'ime ọrịa na -efe efe, ọbụlagodi na ejighị n'aka, anyị ga -eme ihe anyị tụrụ anya na ọ ga -eme nke ọma.
Ekwenyere m na anyị nwere ike rụọ ọrụ kacha mma maka mkpa ahụike ọha nke mba site na ịnye ọgwụ maka ndị agadi, ndị nọ n'ụlọ ọrụ nlekọta ogologo oge, ndị nwere nsogbu ahụike, yana maka ndị okenye nọ n'ihe egwu dị elu site na mkpughe ọrụ na ụlọ ọrụ na COVID-19. . Nke a dabara na ikike nkwado FDA nke mere ka ndị otu a tozuo maka ịgba ume. Taa, ACIP tụlere naanị data maka ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech. Anyị ga -eji otu echiche nke ịdị ngwa, ndụmọdụ maka ọgwụ mgbochi Moderna na J&J ozugbo data ahụ dị.
Ọ bụ ezie na mmemme nke taa bụ nzọụkwụ mbụ metụtara ịgba ọgwụ mgbochi, ọ gaghị adọpụ uche na isi ihe anyị na -elekwasị anya na ịgba ọgwụ mgbochi mbụ na United States na gburugburu ụwa. Achọrọ m ikele ACIP maka mkparịta ụka ha nke ọma na nyocha sayensị na data dị ugbu a nke mere ka m mara nkwanye ugwu m.
Teresa Crawford ekwu, sị:
September 25, 2021 na 17: 53
SMH… Ana m ewepụta oge ịza ụgbọ a !!! Echere m na ọgwụ mgbochi ahụ enwetabeghị ọnụ ọgụgụ ọnwụ kacha elu dịka e mere atụmatụ…
Yabụ, ndị nta akụkọ ụgha ga -akwagide akụkọ nzuzu a nke ịga nweta nkwalite! Ọ bụ ihe nwute n'ezie ịhụ ka ọtụtụ ndị ghọgburu ikwere ụgha a!
Nwa nkịta ekwu, sị:
September 25, 2021 na 14: 26
Ee ziri ezi. Ọ fọrọ nke nta ka m kwere gị.
Kathy Ward ekwu, sị:
September 25, 2021 na 10: 20
Ị nwere ike nweta nkwalite Pfizer ma ọ bụrụ na ị nweta ọgwụ mgbochi moderna